Accueil > Gazetin'ny nosy > Asa fanaovan-gazety: Nitohy tany Ambositra ny fanofanan- dRabelaolao sy José-Kely
Asa fanaovan-gazety: Nitohy tany Ambositra ny fanofanan- dRabelaolao sy José-Kely
Ny radio Maria izay onjam-peon’ny Katôlika indray no nanohizan’ingahy Jesy Rabelaolao sy José-Kely na José Andrianoelison ny fampiofanany ny tanora izay liana amin’ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera.
Ny asabotsy faha 03 sy ny alahady faha -04 febroary 2018 teo no nanatontosana ity fiofanana sy fizarana traikefa ity. Nampiofana tamin’izany ingahy Jesy Rabelaolao izay mpanao gazety ato amin’i “La Gazette de la Grande Ile” mpanentana fandaharana sy mpanao gazety tao amin’ny onjam-peo Tsioka Vao (RTV) teo aloha. Araka ny fantatra dia programan’asan’izy sy ingahy José Andrianoelison na José-kely izao notontosainy izao. Ingahy José-kely izay mbola any ampitan-dranomasina nefa nanome ny alalana hitondrana ny anaran’izy roa lahy amin’ny fanofanana noho ny tsy maha eto an-toerana azy. Mbola ny fikambanana “Madagasikara Nosy Sambatra” izay tarihin-dramatoa Ony Rabemanantsoa hatrany no niantoka ny fanatanterahana ara-materialy sy ara-bola ny fiofanana. Manohana ara-teknika izany koa ny vondrona orinasa-tserasera “La Gazette de la Grande ile » sy ny « Aiko Production ».
Miompana tamin’ny fanentanana fandaharana amin’ny onjam-peo na « animation radio » sy ny asa fanaovan-gazety ny fanofanana. Nahatratra 38 ny isan’ny mpiofana. Nanambara ny talen’ny onjam-peo Maria ao Ambositra Mômpera Nonne fa tsy ampy ny fotoana izay nifampiofanana ka hotohizana aoriana izany. Hisy aloha ny fampiharana hataon’ireto mpiofana ireto ao anatin’ny telo volana, dia hijery ny fomba hanohizana indray ny fampiofanana rehefa avy eo. 13 taona no zandriny indrindra izay kilasy faha telo, ary 75 taona no zokiny indrindra, izay raiamandrenin’ny onjam-peo. Tonga nanatrika ny fiofanana koa ny mômpera avy ao amin’ny kolejy Saint Louis, ny filohan’ny onjam-peo Maria ary ray aman-dreny mpanohana avy any Fandriana sy Ambositra. Nisy koa ny fizarana traikefa natolotra ny mpanao gazety tranainy Rakoto Jean Pierre ary ny mpampiofana Lala Raherimampionona.
Mampiavaka ny Radio Maria ao Ambositra dia noho izy mihodina amin’ny alalan’ny fikambanana laika ka mpiasa manao asa an-tsitrapo avokoa no manatontosa ny asa rehetra ao aminy. Ny Fikambanana Radio Maria no manao ny hahazoana ny vola hihodinany fa tsy misy mpamatsy vola manokana.
Marihina fa mbola hisy koa ny fanofanana hafa izay hataon’ny fikambanana “Madagasikara Nosy Sambatra” aoriana kely ao Ambositra ihany noho ny fangatahana maro tany an-toerana efa ho enim-bolana izay ka ny mpianatra sy ny olona liana amin’ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera no hasaina amin’izany.
Taorian’ny fampiofanana nataon’i Jesy Rabelaolao sy José-Kely na José Andrianoelison tao Antananarivo ny volana septambra 2017 sy tany Miarinarivo Itasy tamin’ny volana Novambra 2017, dia izao mitohy any Ambositra izao ny fanomezan-tanana ataon’izy roa lahy ireto. Olona 350 teo ho eo no nahazo tan-tsoroka tamin’ny fanofanana natao hatramin’izay.
Marihina fa maimaimpoana ny fanofanana zarain’izy roalahy ireo miaraka amin’ny “Madagasikara Nosy Sambatra” sy “La Gazette de la Grande Ile” ary “Aiko Production”.